“Mondial 2018”: noporofoin’i Rosia ny tanjany amin’ny toekarena | NewsMada
“Mondial 2018”: noporofoin’i Rosia ny tanjany amin’ny toekarena
Volabe ny avy amin’ny firenena iray mandray ny “Mondial”. Singa voalohany indrindra hisafidianan’ny Fifa azy ny tanjaky ny firenena eo amin’ny toekarena mifaninana ny handray izany. Matanjaka eo amin’ny lafiny toekarena i Rosia matoa nankatoavin’ny Fifa nandray iny fifaninanana goavana indrindra maneran-tany iny. 11,6 miliara dolara ny tetibola natokan’io firenena io nandraisana izany. Nanamboarana kianja iray fotsiny, mitentina 360.000 dolara ny ambany indrindra. Nisy 10 ny kianja vaovao ary nohavaozina ny roa.
Tsy ny Frantsay ihany no tompon’ny fandresena fa indrindra koa ny firenena rosianina, afaka mihambo miaraka amin’ny filohany, i Vladmir Poutine. Nahazo tombony ny sehatry toekarena rehetra: fitaterana, fifandraisan-davitra, fandraisam-bahiny, asa vaventy, fotodrafitrasa, sns. Tsy nijanona tamin’ny famaranana, ny 15 jolay, iny ihany ny lafiny toekarena fa mitohy izao ny fifandraisan’i Rosia amin’ireo firenen-kafa. Mbola maro ny tarehimarika tsy nivoaka.
Tena tompondaka ny Fifa
Tompon’ny fandresena lehibe koa i Etazonia na tsy nandray anjara aza, nahazo ny tsena amin’ny fandraofam-bola eo amin’ny saran’ny fampitana ny sary, 425 tapitrisa dolara. Tompon’ny tsena sy mbola nahazo izany ry zareo Amerikanina amin’ny “Mondial 2022” hatao any Quatar. Fa tena tompondaka ny Fifa, amin’ny lafiny rehetra. Tao anatin’ny telo taona, 2015 hatramin’izao, 1,65 miliara dolara ny saran’ny varotra sy ny tsena rehetra ; 3 miliara dolara ny saran’ny fampitana sary. Mbola hafa ny vidim-pidirana, 110 dolara hatramin’ny 1.100 dolara tamin’iny “Mondial 2018” iny. Voatokana ho an’ny Rosianina ihany ny tapakila 110 dolara.
Misongadina amin’ny rehetra sy efa nalaza hatramin’izay ny Coca-Cola, niara-niasa akaiky tamin’i Rosia. Teo koa ny Apple, ny Ferrero sy ny maro hafa. Ireo rehetra ireo, nampiditra 128,3 tapitrisa euros ho an’ny TF1 sy ny BeIN fotsiny. Nifaninanan’ny Nike sy ny Adidas mafy ny “Mondial 2014” natao tany Brezila. Tamin’io fotoana io, nidirana roa miliara euros be izao ny Adidas, ambony indrindra teo amin’ny tantarany, sady mbola nanohana an’i Alemaina tompondaka eran-tany 2014.